ISonos One SL entsha, isipikha ngaphandle kwemakrofoni, manje isiyatholakala ngama-euro angama-199 | Izindaba zamagajethi
ISonos One SL entsha, isikhulumi ngaphandle kwemakrofoni, manje isiyatholakala ngama-euro angama-199
Lapho sifuna izipikha ezihlakaniphile, sinenqwaba yezinketho esinazo, noma ngabe eziningi zazo zingadizayinelwe noma zenzelwe ukujabulela umculo wethu esiwuthandayo nekhwalithi ewufanele. Uma sifuna ikhwalithi ezwakalayo, manje singakhohlwa kokubili i-Google Home kanye ne-Amazon Echo eningi.
I-Sonos ingenye yezinketho ezimbalwa ezitholakalayo manje emakethe, uma ngaphezu kwesipikha esihlakaniphile sifuna ikhwalithi yomsindo. Uma sifuna ikhwalithi ezwakalayo kuphela, iSonos futhi iyindlela engcono kakhulu etholakalayo manje emakethe ngenxa ye I-Sonos One SL, isikhulumi ngaphandle kwemakrofoni ukujabulela umculo ngekhwalithi esiyifanele.
ISonos One SL entsha, njengeSonos One, nayo iyahambisana ne-Apple AirPlay 2, esivumela ukuthi sakhe umoya ohlukile egumbini ngalinye kusuka kudivayisi efanayo. Le modeli yenzelwe ukuthi isetshenziswe kunoma yiliphi igumbi, kufaka phakathi leli elingenhla kwekhishi noma endlini yokugezela, ngenxa ye- ukumelana nomswakama osinikeza wona.
Singahlanganisa iSonos One (imodeli nomsizi) nenye i-One SL egumbini elifanayo ukudala ukuhlukaniswa kwesitiriyo futhi sijabulele umsindo ocacile. Futhi singayisebenzisa njengezikhulumi ezingemuva zohlelo lwethu lweshashalazi lasekhaya nge-Sonos Playbar, i-Sonos Playbase, noma i-Sonos Beam.
ISonos One SL entsha ibiza ama-euro angama-199Itholakala ngemibala emnyama nemhlophe futhi singayithola ngqo kuwebhusayithi yomkhiqizi nasezitolo ezigunyaziwe.
Le divayisi ijoyina eminye imikhiqizo emibili eyethulwe yinkampani kuFIFA 2019 ebibanjelwe eBerlin: I-Sonos Move, isikhulumi esinikwa amandla sebhethri, Intengo yayo ingama-euro angama-399 ne-Sonos Port, okuyidivayisi esingaxhuma kuyo ku-stereo yethu yamanje futhi siyiphathe ngedivayisi yethu. Intengo yeSonos Port ingama-euro angama-449.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Izipikha » ISonos One SL entsha, isikhulumi ngaphandle kwemakrofoni, manje isiyatholakala ngama-euro angama-199
I-Huawei Watch GT 2: I-smartwatch esisha somkhiqizo sisemthethweni
Ungayivimba kanjani inkulumo-ze yokhetho ekufinyeleleni ebhokisini lakho leposi